Fiarovana amin’ny Covid-19: hanolotra ilomenaka sy kojakoja ny Gehem | NewsMada
Fiarovana amin’ny Covid-19: hanolotra ilomenaka sy kojakoja ny Gehem
Par Taratra sur 01/04/2020
Manana karazana vokatra ilomenaka maromaro avy amin’ny zavamaniry eto amintsika ny Vondron’ny mpamokatra sy ny mpanondrana any ivelany ny ilomenaka eto Madagasikara (Gehem). Nilaza ny filohany, Rakotoson Nirina Olivier, fa amin’izao vanim-potoana sarotra manoloana ny fiparitahan’ny tsimokaretina Coronavirus izao, hanolotra fanomezana maimaim-poana ny ampahany vokatra ny Gehem ho an’ireo mpisehatra mivantana isan-tsokajiny. Anisan’izany ny ilomenaka avy amin’ny ravintsara, ny tsiranoka fidiovan-tanana (gel) efa misy ilomenaka, ny rano fisasan-tanana, sns.
Hahazo izany ny mpiasan’ny fahasalamana sy ny dokotera eny amin’ny hopitaly mandray ny marary, ny mpitandro filaminana, ny miaramila, ny zandary, ny polisy. Eo koa ny mpiasan’ny minisitera tsy maintsy manao ny fiambenan-draharaha, ny mpizara vary ny PPN amin’ny tsena mora, sns.
Samy hafa ny lalàna eto Madagasikara sy ny any ivelany. Nataon’ireo farmasia sy mana-pahaizana vahiny fitiliana avokoa ny ilomenaka aondran’ny Gehem any ivelany (Frantsa, Belzika, Soisa, Alemaina, …) ary ankatoavin’ny fanjakana any aminy avy hatrany. Nilaza ny Rakotoson Nirina Olivier, fa miandry ny fankatoavan’ny manam-pahaizana eto Madagasikara ny Gehem hanadihady ny lafiny fitsaboana sy fahasalamana eto amintsika.
Anisan’ny ilomenaka ahafahana manamafy ny hery fiarovana ny vatana ny ravintsara, ny kininim-potsy, sy ny hafa, manatsara ny fisefoana. Azo ahosotra amin’ny ivohon’ny tanana roa, atao mifanandrify amin’ny orona sy ny vava ary fohina, toy ny mievoka. Marihina fa tsy mahazo mampiasa azy ny reny bevohoka sy ny zaza latsaky ny herintaona sy tapany.